Tag: 9cloud | Martech Zone
Tilmaamaha Goobta ee Baadigoobka Warbaahinta Bulshada
Isniin, Janaayo 6, 2014 Axad, Janaayo 5, 2014 Douglas Karr
Sawir-gacmeedkan oo ka socda Lemonly iyo 9clouds oo bixinaya aragti ku saabsan sida loola socdo warbaahinta bulshada waa mid gaar ah. Ujeeddadu waxay ahayd in sawir cad laga bixiyo si looga jawaabo saddex su’aalood oo 9clouds marwalba la helo - Shabakado noocee ah ayaan isticmaalayaa? Maxay tahay sababta aan u adeegsado Pinterest ama Google Plus ama [insert network]? Shabakadee ayaa ugu fiican ganacsigeyga? Xogta warbaahinta bulshada waxaa ku jira tirooyinka muhiimka ah, suuqyada la bartilmaameedsanayo, dhagaystayaasha iyo waqtiga u go'an shabakad kasta.